Ngatikurisei mabhizinesi pamwe chete - Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Ngatikurisei mabhizimusi pamwe chete
CJdropshipping ndeimwe yemapuratifomu akakurisa ekudonhedza anogara muChina, mapurogiramu edu ekubatana anozvipira pakubudirira kwako nekusimudzira iwe kune vateereri vedu vepasirese.
Nei tichibatana nesu?
Vanopfuura mazana matatu vakanyoreswa vanodonhedza
Pamusoro pe400k SKUs anowanikwa uye achiri kukura
Kupfuura 1m maodha pamwedzi uye ichiri kukura
Yemunharaunda vatengesi vanobatirana kutenderera pasirese
Inobatsira Affiliate chirongwa - Refer uye uwane
Yega yekutakura chiteshi: CJPacket (1-2 masvondo nekukurumidza kupfuura AliExpress paavhareji)
Yakanyatsobatanidzwa neShopify, eBay, Woocommerce, Lazada, Shopee, pamwe neAPI
Tingashandira pamwe sei?
Yedu yakabatana chirongwa chiri nyore kwazvo kutanga nacho. Ingo gadzira yako CJdropshipping yekubatana chinongedzo mumasekondi uye wotanga kuigovana, iwe unowana 2% yemari yakazara (kwete purofiti) iyo inobatana inobatanidza inogadzira kwegore rese.
Muchinjiko Wekusimudzira Mikana
Isu tanga tichitsvaga nzira dzakasiyana dzekudyidzana nemapuratifomu ane chekuita nekudonha-pasi, kusvika parizvino takavaka hukama hwakareba nePayoneer, Mercury, Shipstation, Aftership, Debutify uye PageFly, nezvimwewo. unogamuchirwa kwazvo kuti utaure nesu.
Chigadzirwa chekutsvaga mapuratifomu
Ndeipi chigadzirwa yekutengesa? Uyu mubvunzo unoshungurudza vazhinji vedu vanodonhedza vanotakura, ivo vanoda hunyanzvi hwekutsvaga zvigadzirwa zvekuvaudza kuti ndeipi niche yekutora uye ndezvipi zvigadzirwa zvekutengesa. Iwe une chigadzirwa chekutsvaga, isu tinobata zvimwe zvese. Parizvino tashanda pamwe neZik Analytics, AutoDS, Sell The Trend uye DSM Tool, nezvimwe. Kana iwe uri kupa iyo chaiyo sevhisi, taura nesu isu kuhwina-kuhwina bhizinesi hukama!
Mentorship Partner Chirongwa
Iwe unogashira yemahara traffic mazuva ese pasina kusimudzira makosi ako wega. Tichakusundidzira iwe vashandisi vezvinangwa (kudonhedza vanotanga), uye titungamire traffic kune yako kosi peji kana saiti.
Taura nesu kuti tibatsirane